परपुरुषसँग लागेपछि बिष खुवाई ४ वर्षे छोराको हत्या ! -
परपुरुषसँग लागेपछि बिष खुवाई ४ वर्षे छोराको हत्या !
२३ माघ, पोखरा । सल्यानमा एक युवतीले आफ्नै छोरालाई विष खुवाएर मारेको खुलेको छ ।
Previous लागुऔषधसहित दुई जना पक्राउ
सुन चाँदी पसलको सटर फोड्दै गरेको अवस्थामा सातजना पक्राउ